Wax walba waa in aad wax ka ogaato iPhone gurmad password
Dhamaanteen waan ognahay sida ammaanka file waxaa muhiim ah iyo in si gaar ah kiiska marka ay timaado iPhone dib ammaanka. Ka fikir waxa ka mid ah sidan, ilaa dib aad waxaa ku jira macluumaad muhiim ah sida xiriirada, wada hadalka SMS, Log Phone, Soo gal macluumaad si Accounts, Notes, Emails iyo macluumaad badan oo xasaasi ah oo kale. Tani waa in ay tusinayaan in macluumaadka sida loo baahan yahay in mar walba la ilaaliyey ka dadka kale xitaa marka ay ku kaydsan tahay gurmad ah. Maqaalkani waxa uu ku siin doonaa dhammaan macluumaadka aad u baahan tahay inaad ogaato oo ku saabsan iPhone gurmad badbaado iyo wax kaqabashada markasta oo ay jiraan wax dhibaato ah oo sirta ah.
Configuring ah gurmad Password
Tallaabada ugu horreysa waa in ay qaataan peek ah ee sida aad sir kartaa iPhone gurmad files. Quruxda habraaca sirta ah waa in ay tahay mid fudud in la raaco oo la hirgeliyo. Nidaamka ayaa sidoo kale uniform labada kombiyuutarada Mac iyo Windows. Si sir aad files dib, xiriiriyaan iPhone isticmaalaya cable USB ah kadibna aan biloowno codsigaaga Lugood. Hubi in aad galeeysid Lugood iyo dooran iPhone. Riix tab Kooban oo ka heli Options.
Dooro sanduuqa jeegga ku qoran gurmad sir iPhone. Sanduuqa hadal A arbushin doonaa taasoo keentay in aad ku qortaa erayga sirta ah.
Sidii la filayay farsamo sirta loo isticmaalo in habkan uu yahay mid aad u adag tahay in sidaas crack waxaa lagu talinayaa in ay is ogow of sirta. Haddii aad ka ayaa laga badiyay gurmad iPhone sirta markaa waxaa jira qaar ka mid ah siyaabaha aad isticmaali karto si ay u helaan aad gurmad.
1. Jihosoft Lugood ee kaabta Unlocker
Qalabkani waxa uu ka mid yahay kuwa ugu fiican baqdin qorsheyaasha ay decryption yarada waxay. Software waxaa loogu talagalay in ay jebiyaan sirta la isticmaalayo saddex doorasho weeraro password fiican. Si aad u isticmaasho qalabka waxaa aad kala soo bixi kartaa demo oo u tijaabiyaan balse aad ka iibsan kartaa si aad u hesho natiijo aan fiicnayn. The site rasmi download waa http://www.jihosoft.com/itunes . Ka dib markii ay soo degsado, waxaad u baahan doontaa inaad gashato iyo bilowno waa. On furitanka, software si toos ah loo ogaado doonaa files gurmad in your computer. Dooro mid ka mid ah oo raba in ay decrypt.
Tallaabada xigta waa in ay doortaan nooca weerar password aad u malaynayso ku haboon xaaladaada. Haddii aad qabto wax fikrad lahayn, dooran weerarkii caayaan-force. Haddii aad ka qayb ogaan sirta ah, u isticmaalaan caayaan-force la weerarkii maaskaro ama Dictionary Weerarkii.
Ka dib markii aad dooranayso waxa aad dooni, riix Next dooro Start si ay u bilaabaan soo kabashada password. Sug nidaamka si uu u joojiyo iyo sirta ah oo aad ka heli doonaa sirta ah.
Waxay bixisaa saddex doorasho decryption password
Waxa uu leeyahay interface user wanaagsan
Waa xoogaa gaabis ah
2. Ternoshare iPhone kaabta Unlocker
Tani waa software kale soo kabashada password gurmad iPhone oo bixiya isticmaala saddex doorasho si ay u decrypt sirta illoobay. Software waxa kale oo uu si xor ah u soo bixi, laakiin waxaa laga iibsan kartaa mid ka mid ah si ay u helaan astaamaha buuxa. Si aad u isticmaasho software tan aad leedahay inaad kala soo baxdo iyo gashato ugu horeysay. Link download waa http://www.tenorshare.com/products/iphone-backup-unlocker.html
Ka dib markii la rakibey, abuurtaan software ka dibna riix on dari on interface ka. Qalab ayaa si toos ah u heli doonaan file gurmad ah.
Haddii aan samayn, markaas waxaad u baahan doontaa in ay soo dhoofsadaan files gurmad . Software ayaa sidoo kale waxay bixiyaan saddex siyaabood oo aad ku sirta: Weerarkii caayaan-force, weerarkii maaskaro, ama weerarkii Dictionary.
Dooro lambarka koowaad ka dibna riix Start . Software ayaa isku dayi doonaa oo dhan password suurtagal ah isku markaas idin ​​siin sirta ah daqiiqado yar ka dib.
Waxa ay ku siinaysaa noocyo kala duwan oo weerarro password
Waxay noqon kartaa xoogaa gaabis ah
3. iSumsoft Lugood Password Refixer Ladnaansho Lugood ee kaabta Password on iPhone / iPad / iPod
Tani waa software ah in kabanayso sirta illoobay on shiidaa version mid ka mid ah iPhone oo lagu daray qalabka iPad iyo iPod. Software ka shaqeeya nidaamka qalliinka daaqadaha. Software ayaa lagala soo bixi karaa http://www.isumsoft.com . Marka lagu rakibay, ordo software iyo guji Open iyo dooro file gurmad ka sahamisa faylka. Markaas riix OK . Waxaad gacanta ku dari kartaa file isticmaalaya ikhtiyaarka File Add .
Dooro nooca weerar tihiin kuwo dooni ka fursadaha soo socda: caayaan-force, maaskaro, weerarkii Dictionary, iyo Smart ka dhacay. Dooro weerar Smart haddii aadan haysan wax fikrad kasta oo ku saabsan sirta ah ee aad lahayd. Dooro goobaha ay weerarka ku siiyey waxaad dooran oo guji Start inuu ka soo kabsado password.
Waxay bixisaa afar weerar password
Waxaa la shaqeeyaa daaqadaha oo kaliya
> Resource > iPhone > Wax walba oo aad ka ogaato ku saabsan iPhone kaabta Password.